ေအာက္စီဂ်င္ရႈေနလ်က္နဲ႔ အသက္ေတြဆုံးရႈံးေနရတဲ့ အေၾကာင္းကို ျပန္လည္မၽွေဝလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခိုင္သင္းၾကည္…. – Cele Oscar
ေအာက္စီဂ်င္ရႈေနလ်က္နဲ႔ အသက္ေတြဆုံးရႈံးေနရတဲ့ အေၾကာင္းကို ျပန္လည္မၽွေဝလာတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခိုင္သင္းၾကည္….
August 4, 2021 By L YC Celebrity
လတ်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Covid ရောဂါ ဟာ အောက်စီဂျင် တစ်ခုတည်းရှိနေရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင် အစားအသောက်တွေကိုလည်း ဝင်သလောက် စားပြီး ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင် လုပ်ရတာမျိုးပါ။ တတ်သိနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ ရဲ့ ပြောစကားအတိုင်းလိုက်နာပြီး စနစ်တကျလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် အသက်ဘေးကနေ လွတ်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ပါမောကခ ဒေါက်တာခင်မောင်ထွေးရဲ့ အောက်စီဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လွဲမှားမှုတစ်ခုကို ထောက်ပြထားတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို ခိုင်သင်းကြည်က သူမ ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်ကနေတဆင့် ပြန်လည်ဝေမျှပေးလာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာကို ” Oxygen ရှုရဲ့ သားနဲ့ ဘာ့ကြောင့်သေ လဲလို့ မျှဝေပေးတဲ့ဆရာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙏🙏🙏 အပျင်းမကြီးဘဲ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းတွေ များများ လုပ်ကြပါနော်💪❤️ လေထဲမှာရှိတဲ့ အောက်စီဂျင် (၂၀-၂၁%) ဟာ လုံလောက်တာ ထက်ပိုပါတယ် ဆိုတာကို ထပ်မံအတည်ပြုပြောချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုဗစ် မှာ “ဘာ့ကြောင့် အောက်စီဂျင် အပိုကို သုံးနေ ကြရလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ရှင်းပြပါ့မယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အဆုပ်မှာ လေအိပ် (alvilia) လေးများ (၇) မီလီယံ လောက်ရှိပါတယ်။ ထိုလေအိပ် များကို ဖြန့်လိုက်ရင် အလျား (၇၀) မီတာ၊ အနံ (၇၀) မီတာလောက် ကျယ်ပါတယ်။ ထိုလေအိပ် လေးများကို သေးငယ်တဲ့ လေပြွန် (bronchioles) လေးများဖြင့် စပျစ်ခိုင် လို ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။
ထိုလေအိပ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာက သေးငယ်တဲ့ ဆံခြည်မျှင်သွေးကြောလေးများဖြင့် ဝန်းရံထားပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာက လိုအပ်တဲ့အောက်စီဂျင်ကို အဲဒီနေရာကနေ ကိုယ်ခန္ဓာထဲ ပို့ရပါတယ်။ ကိုဗစ် ဖြစ်သူများရဲ့ ပြသနာကအဲဒီနေရာမှာပါ။ ဆံခြည်မျှင် သွေးကြောလေးများ ပိတ်တယ်။ လေအိပ်ပြွန်ငယ်လေးများ ချွဲဖြင့်ပိတ်တယ်။ ပိတ်တဲ့ အရွယ် အစားပေါ် မူတည်ပြီး လေအဝင် အထွက်၊ အောက်စီဂျင် ကိုယ်ထဲရောက်တဲ့ ပမာဏ ကွာကြပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ကျ တယ်ဆိုတာ ပိတ်တဲ့ပမာဏ များလို့ပါ။ အောက်စီဂျင် ရှူလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကျန်နေတဲ့ လေအိပ် နည်းနည်းလေးထဲ မှာရှိတဲ့ အောက်စီဂျင် (၂၀%) ကို မြှင့်ပေးလိုက်တာပါ။ အဲဒါဟာ ခဏတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ရက်ပိုင်းလေးပါ။ ” ဆိုပြီးရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့လည်း ” အောက်စီဂျင်ကို၌က ကြာကြာ ရှူရင် လေအိပ်လေးများ ပြန်ဖောင်း လာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ surfactant လို့ခေါ်တဲ့ ဓါတ်တစ်မျိုးကိုယုတ်လျော့စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အောက်စီဂျင်ကို ဘိန်းရှူသလို တစ်ပါတ် နှစ်ပါတ် ရှူနေရင် ကျန်နေတဲ့ လေအိပ်လေးတွေ ပါပိတ်ကုန်ပြီး လူသေတဲ့အထိ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ဆို (၃-၄)ရက်အတွင်း သေကြ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေအိပ် ပြန်ဖွင့်ပေးမဲ့ အသက်ရှူ လေ့ကျင့်ခန်းကို (မဖြစ်မနေ) ကျန်တဲ့ လေအိပ်လေးတွေမပိတ်ခင် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ကိုလုပ်ရပါ့မယ်။ နေကောင်းနေစဉ် ကတည်းက လေ့ကျင့်နေရင် တကယ်လက်တွေ့ ရောဂါရတော့ ဆက်လုပ်နိုင်တာပေါ့။ Google မှာ Breathing Exercises for Covid Patient ဆိုရိုက်ရှာပါ။
အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေ အများကြီးတွေ့ရပါ့မယ်။ ဖွင့်ပြီး ကိုယ်တိုင် လိုက်လုပ်ကြပါ။ ဆေး၊ အောက်စီဂျင်တို့ကိုသာ အားကိုးမနေကြပါနဲ့ ” လုံ့လလည်းထူ၊ ဉာဏ်လည်းကူ ပျိုးလည်းသန်မှ၊ ငါလည်းမ ” တဲ့။ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး အင်အားမစိုက် မလုပ်ချင် မ ကိုင်ချင်ရင်တော့ ကိုယ်ပဲ နစ်နာ ဆုံးရှုံးရမှာပါ။ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာခင်မောင်ထွေး” ဟုဆိုကာ ပြန်လည် ဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်။ စာဖတ်သူတို့လည်း ဆရာကြီးရဲ့အကြံပြုချက်ကို အသေအချာလေးဂရုစိုက်ကြဖို့
Source: Khine Thin Kyi
ဦးေမတၱာရဲ့ ေနာက္ဆုံးခရီးေလးကို လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ မွတ္တမ္း ဗီဒီယို……
ဖခင္ႀကီးရဲ့ ရက္လည္ေန႔မွာ ေထာပတ္ထမင္းလႉဒါန္း ေပးရင္းေကာင္းမႈ႔ကုသိုလ္ ျပဳေပးခဲ့တဲ့ ညီနႏၵ